You are here: Home Other [SHAN] History [SHAN] သꨰꨓ္ပꨯꨤး သြꨯꨵ(꨽) မꨯꨤ(꨽) HsenPai News Journal No.(2) Vol.(2)
ဣန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုမှ ယိုးဓယားယဉ်ကျေးမှုသို့ - ဆန်းထွန်း
Category: History [SHAN]
Published on Monday, 26 September 2016 18:05
eBook file size: 410 KB
Publication: ၁၉၅၁ ခုနှစ်ထုတ် လူထုဂျာနယ် အမှတ် ၂၃ တွင် ပါသော အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှု စာပေရေစီးကြောင်းသည် ယိုးဒယား(ခေါ်)ထိုင်းနိုင်ငံသို့ စိမ့်ဝင်စီးဆင်းလာပုံကို ဖော်ပြထားသော ဗဟုသုတရဖွယ် အဖိုးတန် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖြစ်​ပါသည်။
A Brief Account Of The Akha In The Kyaington Area, Myanmar - Mie Mie Lwin
Published on Monday, 11 July 2016 17:04
eBook file size: 471 KB
ebook pages: 18
Publication: Myanmar Historical Research Journal, Number(13), June, 2004, Page-97-108
ချစ်စဖွယ် ဂုံအမျိုးသားများ - ဗိုလ်မှူးဘရှင်
Tai khun and keng-tung 4th seminar at chiang-mai university
ယွန်းလူမျိုးတို့၏မြေဝိုင်းအက - တင်ဝင်း(ကသာ)
လားဟူရိုးရာ နာမည်ပေးဓလေ့ - မောင်ဟေမာ
ဝ တိုင်းရင်းသားများ၏လူမှုစီး​ပွားရေးဘဝ - ​ပါမောက္ခဒေါ်တင်ရီ
ပင်လုံစာချုပ်ရှင်းတမ်း (လက်စွဲစာအုပ်) - ခွန်းမတ်ရ်ကိုဘန် (Khou Marko Ban)
Published on Monday, 04 July 2016 15:07
eBook file size: 37.9 MB
ebook pages: 128
Publication: International Karen Organisztion မှ ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ ၁၂ ရက်၊ ဖေ​ဖေါ်ဝါ ရီလ၊ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်။ ဤစာအုပ်၌ အခန်း(၁၁)ခန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး နောက်ဆက်တွဲ (၂)ခန်း ပါရှိကာ ဦးထွန်းမြင့် (တောင်ကြီး)၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ ပေးစာကိုလည်း နောက်ဆက်တွဲ ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့သော် ဤပေးစာသည် ဦးထွန်းမြင့်(တောင်ကြီး) ရေးသားသော ရှမ်းပြည်ဘယ်လဲ စာအုပ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်၏။ စာဖတ် ပရိသတ်များ နိုင်ငံရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသော ပညာဗဟုသုတများ ရရှိစေမည့် စာအုပ်ကောင်း တစ်အုပ် ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
ရှမ်းပြည်ဘယ်လဲ-ခွဲရေးတွဲရေးပြဿနာ-ရှမ်းပြည်၏နစ်နာချက်များ-ပြည်ထောင်စုတွင်းမှ တန်းတူသော ရှမ်းပြည် (၄-အုပ်တွဲ) - ဦးထွန်းမြင့်(တောင်ကြီး)
ဧရာမြစ်ဖျား ကျားနီများ - ဦးစိုင်းကျော်ဦး
Published on Saturday, 09 July 2016 17:02
eBook file size: 112 KB
ebook pages: 14
Publication: ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ကျိုင်းတုံမြို့၊ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲ၊ ရှမ်းအ​မွေအနှစ် စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် ဖတ်ကြား တင်သွင်းခဲ့ သည့်စာတမ်း တစ်စောင် ဖြစ်ပါသည်။ ရှမ်းနီလူမျိုး အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
သွေးချင်း တိုင်းလိုင်ရှမ်းတို့၏ အပျိုလူပျိုဓလေ့ - မြန်ဂုဏ်ဆောင်(ကချင်မြေ)
ရှမ်းဗမာလူမျိုးတို့၏စပါးယပ်ပွဲ - ကောင်းမွန်
ရှမ်းနီရိုးရာဓလေ့များ - ကောင်းမွန်
ဖောင်တော်ဦး ဘုရားသမိုင်း နှင့် သျှမ်းပြည် ရာဇဝင်အကျဉ်းချုပ်
Published on Thursday, 31 March 2016 17:19
eBook file size: 38.8 MB
Publication: သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ညောင်ရွှေမြို့ အင်းလေးရွာတွင် တည်ရှိသော နာမည်ကျော် အင်းလေးဖောင်တော် ဦး သမိုင်းကြောင်းနှင့် သျှမ်းပြည်ရာဇဝင် အကြောင်းတို့ ပါရှိပါသည်။ အမှာစကားကို မြန်မာနိုင်ငံ ပထမဦးဆုံးသမ္မတ စဝ်ရွှေသိုက်မှ ပြောကြားထားပါသည်။ စာအုပ်ကို ဟဲယာဂိုဏ်းအုပ် ရွာမကျောင်းနီကျောင်းဆရာတော် ဦးသောဘိတ ရေးသားတော်မူသည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ စစ်ကဲမောင်ခိုင်လမ်း၊ တိုက်နံပါတ် ၅၅ ရှိ သုဓမ္မဝတီပုံနှိပ်တိုက်၌ ရိုက်နှိပ်၏။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ပထမအကြိမ်၊ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ဒုတိယအကြိမ် အဖြစ် ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိ သည်။
ကခ်င္ျပည္နယ္ အင္းေတာ္ႀကီး ေရႊမဥၨဴ ဂႏၳ၀င္ဘုရားသမုိင္းေပါင္းခ်ဳပ္
အင္းေလး၀ါကြ်တ္ပြဲ - ရန္ေအာင္
အင္းေလးကို တစ္ေခါက္ အေရာက္လာလွည့္ၾကပါ - ေလးျမင့္
Inle and Inthas
မိုးမိတ်ရာဇဝင်တော်သစ် - ဦးခေမိန္ဒ(ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်)
ဝရဇောတိဂိုဏ်း - တိုးလှ